Madaxweyne Silaanyo Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Safiirka Dalka Finland U Fadhiya Kenya | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Madaxweyne Silaanyo Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Safiirka Dalka Finland U Fadhiya Kenya
August 9, 2016 - Written by Mustafe Faro
Hargeysa (Hubaal) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabiley safiirka Dalka Finland u fadhiya Kenya, Tarja Fernandez, oo ay weheliso Madaxa safaaraddaasi ee dhinaca xidhiidhka horumarinta Eeva Alarcon.
Madaxweynaha oo ay fadhiga ku wehelinayeen wasiirada Arrimaha Dibeda, Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta, Madaxtooyada iyo Xoghayaha gaarka ah ee Madaxweynaha, ayaa ugu horaynba halkaasi ka jeediyey ereyo uu kusoo dhawaynayo weftiga, isagoo ku dheeraaday kana sheekeeyey xidhiidhka labada dale e Somaliland iyo Finland.
Madaxweynuhu wuxuu uga mahadnaqay dublamaasiyiinta reer Finland deeqaha hagar la’aanta ah ee Somaliland kasoo gaadha dalkaasi iyo xidhiidhka wanaagsan ee labada dal. Waxana ka mid ahaa hadalladiisa,“Waxan idiinku soo dhawaynayaa dalka, waxan si mugleh idiinkaga mahadnaqayaa xidhiidhka muddada dheer soo jiray ee wada shaqaynta iyo iskaashiga ee labada waddan”.
Waxan jeclahay inaan si gaar ah u xuso deeqaha wax ku oolka ah ee dalkiinna naga soo gaadha, uguna balaadhan tahay tan aad kaga qaybqaadataan dhinaca caafimaadka, iyo dhinacyada kale ee binu aadaminmo.
Madaxweyne Axmed Silaanyo wuxu ku adkeeyey weftiga dalka Finland inay sii wadaan taageeradooda Somaliland, waxanu yidhi “ Waxaan idinku boorrinayaa taageeradiina Somaliland, idinkoo Finland ah iyo idinkoo ka mid ah midowga Yurubba”
Sida aalaaba Madaxweynaha u caadada ah, wuxu u dhaafay intaa hore inuu ka warbixiyo xaaladaha gudaha ee dalka oo isugu jira dhinacyada maamulka dawladda, nabadgelyada, iyo dhismaha dimuqraadiyadda.
Markuu dhinacaa ka hadlayey, waxa ka mid ahaa howraarta Madaxweynaha Somaliland, “Dal kayagu waa dal haatan gaamuray, isku tashaday oo noqday qaran hirgalay. Waxan samaynay nidaam noo gaar ah oo xallinta khilaafaadka ah, nabadda oon hoosta ka soo dhisnay, taasoo dadkayagu iskaga raalli yahay, kuna kala nabadgalo”.
Wuxuu raaciyey madaxweynuhu inuu ka hadlo sida Somaliland qayb uga tahay caalamka oo waxa dunida kale tahdiidda ku ahi ay Somalilandna ku yihiin, dhinaceedana Somaliland ay wax kala qabanayso caalamka wixii khatar ah ee jira “Waxan wadaagnaa la dagaallanka budhcad badeedda, ka hortagga kooxaha mayalka adag ee xagjirka ah iyo guud ahaanba wax ka qabashada dhibaatooyinka amni ee caalamka ”.
Madaxweynuhu wuxuu u baydhay arrimaha ka dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya, waxaanu yidhi “Waxan la midawnay Soomaaliya July 01-1960kii, waxayse noqotay midnimo shaqayn wayday, waanu xisaabtanay shacbi ahaan, waxanan soo ceshanay madaxbanaanidayadii 18, May,1991kii. Waxaan ku wada jirnaa Soomaaliya Wada hadal dunidu markhaati ka tahay oo annaga naga go’an in uu sii socdo, balse ay caddaanayso marba marka ka dambaysa in uu dhinaca Soomaaliya ka gaabinaayo”. Waxan soo jeedinaynaa inay wada hadaladan ka hawlgalaan dhexdhexaadiyeyaal badan oo ay ka mid yihiin midawga Yurub, siiba dalkiina Finland, si ay wada hadaladaasi u noqdaan kuwo midho dhala.
Ugu dambayn madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa ku soo gunaanaday weedho ku saabsan geeddiga dumuqraadiyada dalka “Waddankayagu dhinaca dumuqraadiyadu geeddi fiican ayuu guuray. Bishan gudeheeda ayaa gobolkii ugu dambeeyey ay ka hirgelaysaa diiwaangelinta codbixiyeyaashu. Waxaa naga go’an doorasho qabsoonta bisha March 2017, oo hawleheeduna marayaan gebegebo.”
Dhinaceeda safiiradu, Tarja Fernandez waxay si weyn ugu mahadnaqday soo dhawaynta ay kala kulantay shacbiga iyo xukuumada Somaliland, iyadoo intaa ku dartay inay ka warranto, hay’adaha dawladda ee ay ilaa hadda la kulantay iyo kuwa ay la kulmi doonto inta ay dalka ku sugan tahay.
Waxay safiiradu ku dheeraatay kaalmada dhinaca caafimaadka ee Finland siiso Somaliland, waxaanay tidhi “Madaxweyne, Waad ku mahadsan tahay soo dhawaynta. Runtii waan jeclaystay Somaliland, iyo sida wanaagsan ee ay hawluhu idiinku socdaan. Waxaan dalka horeba uga qaban jirnay hawlo dhinaca caafimaadka ah oo ay nagaga wakiil ahaayeen khuburo caafimaad oo annaga ah, oo halkan ka hawlgeleyey. Tii ayaan imika kormeeraynaa, isla markaana aanu sahaminaynaa si aanu u sii xoojinno”.
Hadalka haweenayda safiirada ah waxa ku cusbaa inay dawlada Finland doonayso inay qashinka ka dhaliyaan tamar ay ka mid tahay korantadu, taasoo ay sheegtay inay noqotay wakhti xaadirkan cilmi caan baxay, kana suurtawdo in laga hirgeliyo Somaliland. “Waxaan wadnaa qorshe ah in qashinka laga dhaliyo tamar taasoo ka suurtoobi karta dalkiinna, sahaminteediina aanu wadno”.
Waxay intaasi raacisay inay ka hadasho doorashooyinka Somaliland, waxanay tidhi “Waan soo dhawaynaynaa sida fiican ee hawlaha diyaar garawga doorashu uga socdaan dalka. Waxanan jecelnahay inaad sii guntataan, oo aad xaqiijisaan qabsoomida doorashada waa laydin eegayaaye”. Waxa iyaguna hadalka ku darsaday wasiirada kulanka ka qaybgalay iyo haweenayda kale ee wehelisay safiirada, iyagoo markii shirku soo dhamaadayna ay wada jir warbaahinta ula hadleen, wasiirka khaarajiga Somaliland iyo haweenayda Safiirada ah.